बालुवाटारमा बाहिर ‘पानी’ भित्र ‘आगो’ ! « Dainik Online
बालुवाटारमा बाहिर ‘पानी’ भित्र ‘आगो’ !
काठमाडौं । देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव सक्रिय रहेका कारण देशका विभिन्न भूभागमा पानी परिरहेको छ । पानी परेसँगै गर्मी समय भएपनि मौसम चिसो बनेको छ ।
तर, देशको राजनीति भने एकाएक गर्माएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) मा देखिएको विवादका कारण समग्रमा देशको राजनीति तातेको हो ।
बारम्बार स्थगित हुँदै मंगलबार(आज) विहान ११ बजेका लागि बोलाइएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सूचारु हुनु केही समय अघिमात्र स्थगन भएको सूचना बाहिरिएको थियो ।
दुई जना अध्यक्ष रहेको नेकपामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आजका लागि बोलाइएको बैठक स्थगन भएको सूचना जारी गरेका थिए ।
थापाले पार्टीका दुई जना अध्यक्षकाबीच आवश्यक परामर्श र गृहकार्य गरी सचिवालयको बैठकको निर्णय र निर्देशनबमोजिम प्रस्ताव तय गर्न बाँकी रहेको हुनाले आजका लागि तय भएको बैठक स्थगित भएको जानकारी दिएका थिए ।
तर, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भने कुनै सल्लाह नगरी बैठक स्थगन गरिएको छ ।
बैठकमा सहभागी हुन भन्दै अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता माधव कुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लागायतका नेताहरु बालुवाटार पुगेका थिए ।
त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरु पनि बालुवाटार पुगेका छन् । अन्य स्थायी समिति सदस्यहरु पनि बैठकमा सहभागी हुन भन्दै बालुवाटार पुगेको भएपनि बैठक भने स्थगन भएको छ ।
बाहिर पानी, भित्र आगो’
साढे ११ बजे बालुवाटार बाहिर ठूलो पानी परिरहेको छ । पानी परेका कारण मौसम चिसो बनेको छ तर, बालुवाटार भित्रको वाताबरण भने ‘आगो’ बनेको छ ।
ओलीले बैठक स्थगन गरेपनि प्रचण्ड नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्यहरु बैठकमा भाग लिन बालुवाटार पुगेका छन् ।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार त बैठक स्थगित भएको छैन । ओली पक्षका नेताहरुका अनुसार बैठक स्थगित भयो अब बस्दैन ।
ओलीले बैठक स्थगित गरेपछि वालुवाटार पुगेका प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताले बैठक बोलाउन भन्दै बालुवाटारमा छलफल गरिरेहको प्रचण्ड निकट एक नेताले जानकारी दिए। उनीहरुको छलफलमा ओली निकट नेता तथा महासचिव बिष्णु पौडेल पनि सहभागी छन्।
ओली समूहका नेता पौडेल बाहेकका नेता भने बैठक स्थगित भएको भन्दै बालुवाटारबाट घर फर्किएका छन्।
ओली पक्षका नेताहरुले भने पार्टी कार्यालयले सूचना जारी गरिसकेपछि बैठक स्थगित भएको बताएका छन् ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता एवं ओलीका विश्वास पात्र सुवास नेम्वाङले आज बैठक नबस्ने बताए ।
उनले पार्टी कार्यालयले सूचना जारी गरिसकेका लागि आज बैठक बस्ने नसक्ने दाबी गरे । उनले प्रचण्ड नेपाल समूहले गरेको भेला बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘उहाँहरुले किन भेला गर्नुभएको हो थाहा भएन। तर, बैठक आधिकारिक रुपमै स्थगित भएको छ’ उनले भने।
आज पनि ओलीले बैठक स्थगन गरे जसरी पनि बैठक बोलाउने प्रचण्ड नेपाल समूहले हिजो गरेको निर्णयका कारण पनि ‘अब के होला ?’ भन्दै नेताहरु बालुवाटारमै रहेका छन् ।
साउन ६ गते केहीबेर बसेको स्थायी कमिटी बैठक १३ गते सम्मका लागि स्थगित भएको थियो। असार १० गते सुरु भएको बैठक महिना दिन भन्दा बढि समयसम्म अनिर्णित बनेको छ।
ओलीको राजीनामा माग्दै चर्किएको नेकपा विवाद ओली प्रचण्डको पछिल्लो दिनको तिक्तताले झनै चर्किएको छ। पछिल्लो समय एक्ला एक्लै वार्तामा रहेका ओली प्रचण्डबीच केही दिनयता सवांदसमेत हुन सकेको छैन। ओलीले मंसिरमा महाधिवेशन गरेर प्रचण्डलाई एकल अध्यक्षका लागि प्रस्ताव गरेको भए पनि प्रचण्डले अस्वीकार गरेका थिए ।
केही समय अघि फुट नजिक पुगेको आकलन गरिएको नेकपाको विवाद साता दिन अघि केही मत्थर हुने संकेत मिलेको थियो । तर पछिल्लो केही दिन यता प्रचण्डको अभिव्यक्तिपछि भने नेकपा भित्रको विवाद थप चर्किको आकलन गरिएको थियो ।
‘खुमलटारमा हिजोको बैठकले जसरी पनि बैठक बोलाउने निर्णय गरेसँगै बालुवाटार रिसाएको छ’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने,‘त्यसकै काउन्टरका लागि सल्लाह नगरि बैठक स्थगन भएको हुनसक्छ ।’
पार्टीमा विवाद हुँदा समस्या समाधान गर्ने तर्फ लाग्नु पर्नेमा नेताहरु छलफल नै छोडेर हिँडेको आरोप नेकपाका नेता विष्णु रिजालले लगाएका छन् ।
रिजालले भनेजस्तै पार्टीमा विवाद देखिनु समान्य विषय हो । जसलाई छलफलको माध्यमबाट सहमतिको निकास निकाल्न सकिन्छ । तर बैठक बारम्बार स्थन गर्ने र छलफलमा पनि अडान कायम नराख्ने हो भने बैठक बस्नु र छलफल गर्नुको कुनै तुक देखिदैन ।
कोरोना महामारी, बाढी पहिरोबाट पीडित बनेका जनतालाई राहत उद्धारका विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने दायित्व यतिबेला सरकार र दुई तिहाइ नजिक रहेको पार्टीको मुख्य जिम्मेवारी हो ।
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको क्षति भर्ने विषयमा पार्टीमा गम्भीर बहस र छलफल केन्द्रीत गर्दै अघि बढ्नु पर्नेमा सत्तारुढ दल भित्र पदका लागि भएको ‘रोइलो’ ले जनतामा निराशा छाएको छ ।
पाँच वर्षका लागि भन्दै तत्कालिन वाम गठवन्धनलाई जनताले मत दिएका थिए ।
तर दुई तिहाइ नजिक रहेको सरकार र सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलले जनतालाई यसअघिका ९ महिने सरकारले जति पनि आशा र भरोसा दिन सकेको पाइँदैन । त्यसमा पनि पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले खेमा भिडेझै बैठकमा भिड्ने र तल्लो तहको कार्यकर्ता पनि विभाजित हुँदा यसले समग्रमा देशको विकास र राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ ।
त्यसैले नेकपाका नेताहरुको बुद्धि फिरोस् भन्ने कामना यतिबेला जनताले गरिरहेका छन् । छलफल, वार्ता र कुराकानीबाट नमिलेका विषयहरुको समाधान गर्दै अघि बढ्नु र बैठकमा पदका लागि नभइ जनता माझ गरेको बाँचाका विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ।